Tours of Emirates ngo-Okthoba. Isimo sezulu e-United Arab Emirates
Arab Emirates - omunye ethandwa kakhulu iholidi lapho for baseRussia. Ukukhanga yezwe yakhiwa izingxenye eziningana: emabhishi amahle, ngemisebenzi emihle, eziningi zokuzijabulisa kanye ezikhangayo nezitolo ezinkulu. Ngakho-ke, amaRashiya ngenjabulo ukuya Emirates ngo-Okthoba, ngenkathi okusezingeni eliphezulu, lapho izwe tente izimo best for aziphumulele.
I-United Arab Emirates zitholakala eningizimu-mpumalanga yeNhlonhlo Arabhiya. Izwe elisemngceleni nge Oman, Saudi Arabia kanye Qatar. 7 ihlanganisa isimo Emirates lelitimele, ngamunye ephethe umbusi ayo nemithetho, kodwa inqubomgomo angaphandle, zivela njengoba izwe olulodwa emir ophakeme. Inhloko-dolobha isimo lingumuzi Abu Dhabi. Le ndawo ingqikithi UAE kuyinto ayizinkulungwane 80 square metres. km. Ugu ubude 600 km, futhi wageza ngu Gulf of Oman. ezindaweni ezisogwini kukhona, inombolo ezimangelengele ongaphakeme enkulu amatheku nemihume. Eziningi kuleli zwe iyihlane Rub 'al Khali. Kuyinto endaweni isihlabathi esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Iningi nemizana bagxila eduze nogu, enkabeni yezwe abahlala izimo aqinise isandla ngokweqile. Ehlane, kukhona ezivundile ambalwa ezivumela izihambi ngokukhululekile ukuwela phansi ohangulayo. Laphaya UAE nezintaba: empumalanga welula Hajar ububanzi, phezulu lapho ifinyelela 1.5 km. Isimo uhlala ikakhulukazi ngenxa uwoyela, okuyinto abacebile phansi izwe eduze nogu lolwandle. Kodwa amanzi ahlanzekile kulezi zindawo eyindlala. Lapho ngifika esikhumulweni Emirates ngo-Okthoba, ungakwazi ukubamba omunye elihle kunawo sezulu nezikhathi.
United Arab Emirates basesimweni ezishisayo ehlane sezulu kanye elishisayo kakhulu futhi kancane isikhathi semvula ngasogwini ebusika. Ekujuleni yale nhlonhlo, futhi ogwadule, wonke unyaka kuwufanele ukushisa, futhi akukho imvula iminyaka eminingi. Amazinga kuleli zwe elake usuku awehleli ngezansi 20 degrees Celsius. Ehlobo emthunzini uyaqhubeka emhlabeni 40-45 degrees Celsius, futhi ilanga lingafika ku 55. Kusukela ehlane Sivamile ukwehlelwa iziphepho zesihlabathi. Ebusika izinga lokushisa lehla kuya degree 23 ebusuku kungenzeka ezipholile. Ezweni ebusika kukhona izinguquko eziphawulekayo lokushisa imini nobusuku. Kumisa ebhukuda inkathi ngo-December lapho amanzi iqala kudambe degrees 20 Celsius, futhi saqala ngoMashi, nxa amanzi ayithinta ngayo ku-degrees 23. Manje kubhekwe okungcono bethenga, ngisho lapha kukhona Emikhosini ekhethekile ka yokuthengisa ukuheha izivakashi. Kwezulu yonyaka uwela mayelana 100 mm, basuke Ukuboshelwa zisakazwe, okungenzeka kakhulu imvula ngo-Ephreli no-November. UAE ngo-Okthoba, engena okusezingeni eliphezulu izivakashi isizini, ozobakhona kuze April. Okubi kakhulu esimweni sezulu we Emirates akuyona ngisho nokushisa imimoya enamandla isihlabathi.
Izici sezulu ngo-Okthoba
Izikhangibavakashi ejensi ngokuya sebeqala ukuthengisa izinkambo UAE ngo-Okthoba, lapho uvula "isizini okusezingeni eliphezulu". Ngalesi sikhathi, ukushisa kancane kancane uqala ukuhamba, kodwa ntambama ekuqaleni kwenyanga izinga lokushisa kungaba ngisho bakhuphukele amadijithi 35, futhi ebusuku lehla degrees 25. Gulf amanzi ayithinta ngayo ukuba 27, futhi Oman - degrees 23. Lena isikhathi esingcono abathandi beach. I Emirates ngo-Okthoba ukuza ebhukuda abalandeli. Ngalesi sikhathi, amabhishi ezimhlophe wezwe egcwele zezivakashi zithuthelekela lapha, ngezifo nezinhlungu Surfers. Okungahle kube khona imvula kule nyanga iya zero. Kodwa ngokuvamile obukhulu ekuseni fogs. Umswakama kancane uqala wehlise futhi isilinganiso siyizinsuku 63%.
Yiya Emirates ngo-Okthoba kungenxa nje kuphela ngenxa emabhishi, kodwa futhi ukuze ufunde mayelana nomlando futhi izinkambiso zakulelo zwe. UAE - ezweni sasivumela abasha, kubonakala kuphela ngo-1971. Kodwa sekuyisikhathi eside la mazwe wahlala lalolo hlanga. Kusukela ngekhulu lesi-7 principalities encane munye Arab sompristi, okuyinto isimo eyakhelwe nezimiso yamaSulumane. Kodwa-ke isimo ilahlekelwa amandla, indawo ukuwa ngaphansi protectorate of Oman, futhi ngekhulu le-18 kula mazwe iqala umzabalazo ezingahlangani phakathi izikhulu zendawo senkampani "-East India Company" ebesifuna ukuqinisekisa phephile hube lwemikhumbi aseBrithani Gulf futhi ongathanda ukuzibekela yona wokubusa indlovukazi ikakhulu emazweni Arab. Britain wenze siqu sakhe, futhi kukho 1820, ukubusa kweBrithani yasungulwa phezu zwe. Kule ndawo, enkanjini British, ibhodi esibonise omele British ezakhiwa. Iminyaka 150 ke owayebusa British, kodwa bakwazi ukulondoloza indlela emisiwe ukuphila futhi inkolo. Nokho, ukukhula ukwazi kwesizwe kwaholela ekubeni igagasi imibhikisho emelene uhulumeni waseBrithani kanye nayo iBritish kancane kancane aqala ukuphelelwa phansi, ngenkathi ngo 1971 kwase akabuyisanga amaviyo alo zokugcina. Ngakho kukhona isimo entsha ye-United Arab Emirates. Ukwanda okuphawulekayo kokuthandwa amanani kawoyela avunyelwe lizwe esikhathini esifushane ukuze abafinyelela ukuchuma esimeme izakhamuzi zayo futhi ukuqala ukuthuthukisa ezokuvakasha, ukuhweba, isiko kanye ukuhlela zasemadolobheni.
Makalale UAE ngo-Okthoba hhayi kuphela amanga ogwini, kodwa futhi ukuvakashela izindawo ezithakazelisayo yezwe. Ikakhulukazi UAE into ukubona, izwe - ipharadesi izivakashi ukwazi. Kwaba nesiphithiphithi esizayo futhi esikhathini esidlule, futhi kusukela kule "cocktail" kuyinto obumangalisayo. Yindawo yokugogobala zabahamba ukwazi, Yiqiniso, Dubai. Lapha ungakwazi ukubona isakhiwo ahlabayo onqenqemeni kanye ubudala, omakhelwane eyiqiniso kanye indlela yokuphila ukuthi sishintshe kancane kakhulu phakathi namakhulu eminyaka. Ohlwini yezindawo ezibaluleke kakhulu elibiza ngokuvakashela zihlanganisa:
- Burj Khalifa. Lesi sakhiwo akuyona kuphela eliphakeme kunawo wonke emhlabeni, kodwa kuyisimanga kweqiniso yezakhiwo. Kusukela umbhoshongo ukuthi izulu lihle noma ungabona lonke izwe langakhona.
- Isiqhingi yokufakelwa of Palma, emangalisa isibindi ubunjiniyela design, ziqoqwa kanye lonke Umthala yobuciko yezakhiwo.
- White Sheikh Zayed Mosque e Abu Dhabi - ukwakhiwa, esiyingqayizivele ngokunethezeka yayo futhi ububanzi.
- Fortress Al Jahili, Ajman, Al Husn futhi Al Fahidi, wambambezela ukubukeka kwayo ephakathi.
- Burj Al Arab, isakhiwo abadumile Parus.
Futhi lena kuphela kakhulu-kakhulu. Eqinisweni, ezikhangayo lapha izikhathi eziningana ezinkulu.
Izinto okumele uzenze
Kulabo ufuna hhayi kuphela ukuze sunbathe, kodwa futhi ukubona okuthile okuhlukile, qiniseka ukuya Emirates. Isimo sezulu ngo-Okthoba kufanele hambo asebenzayo. Okokuqala nje nakanjani aye ehlane ukuba umxhwele. Ehlane, inikeza ukuzijabulisa yonke ukunambitheka - ikamela ugibele, okwakusevenini, ATV. Kukhona ngisho kungenzeka zokushushuluza, sibheke komkhathi enkulu ebhodini Windhawk yendiza noma ezincane. Ukudoba abathanda UAE sezulu ngalesi sikhathi-ke kudala izimo ezikahle. Kukhona izinkambo ehlukahlukene guided abadobi Gulf. Isihloko ahlukene wokuzijabulisa UAE - kuyinto yezitolo. Kuphoqelekile ukuvakashela emakethe wendabuko empumalanga, ngisho noma ukuthengwa akufakwanga amapulani kufanele beze lapha okuvelayo. A ezitolo ezinkulu omkhulu - iyipharadesi kubathandi yezitolo.
Lapho befika UAE ngo-Okthoba, akudingekile sonke isikhathi ukuchitha ogwini. Kunezinto eziningi kangaka ezithakazelisayo. Yini okudingeka ngempela ukubona? Musical umthombo Dubai, ukushaya esikalini. Futhi izingane kanye nabantu abadala ngeke ujabule kwelinye engcono amanzi amapaki East Wild Wadi. Zizwe uhluke ukushisa nokubanda kungasiza esiyingqayizivele ski resort Sky Dubai. Zonke izivakashi, kungakhathaliseki ubudala, crazy njengomuntu aquarium enkulu e Dubai Mall, ne ingilazi yayo imihubhe eziningi izidalwa ezahlukene ulwandle. Isimo sezulu e-UAE kufanele ahambe, ikakhulukazi kusihlwa, lapho ungakwazi ukuhlela uhambo emzaneni ethnographic e Abu Dhabi. Lapha ungakwazi ukubona yezandla bendabuko, ikhaya kanye nokuphila Bedouins, ukuzama izitsha kazwelonke.
abahambi abaningi bakhetha ukwenza uphumule Emirates ngo-Okthoba. Amanani ngalesi sikhathi, yebo, ephakeme ukwedlula ehlobo kushisa, kodwa kuwufanele umzamo. Ngalesi sikhathi, ngokuvumelana izivakashi, kungenzeka ukuthola zonke okuvelayo: futhi uzibixe elangeni bese nijabula, futhi ubone eziningi ezikhangayo. Ngu isiko, abahambi eziningi Russian belulekwa ukuba axazulule Sharjah, lapho izindlu eshibhile futhi eduze emabhishi uhambe uhambo ezokuthutha zomphakathi noma nge izinkambo ehlelekile. Ngokombono abahambi ebona, iholide e-UAE ngo-Okthoba - kuba value esihle kakhulu imali, inkonzo nokungcebeleka amathuba.
Blue Lake, eduze Kiev: incazelo emfushane
Black Lake (Zelenograd) uhlela ngamaholidi
Metro "Ozerki" - a owaziwa zokuthutha ihabhu yeNyakatho Capital
Izikhangibavakashi Batumi nedlelo layo: yini ukubona?
LaseStavropol. Castle Hill: kanjani lapho? incazelo
Barvikha - eMoscow noma endaweni?
Kusihlwa makeup amehlo aluhlaza, noma kanjani ukuba abe angenakuvinjwa
Amazambane Ryabinushka: sici ezihlukahlukene, impendulo, ikakhulukazi zokutshala nokunakekela. Indlela ukutshala amazambane
Indlela ukulungisa ophahleni isakhiwo sokuhlala
Yini imibala kufanele zixutshwe ukuthola brown in shades ezahlukene ke
Isihloko ingxoxo nomngane - okukulungele?
Usayizi ishadi izicathulo ngoba amadoda
I-Ukulwisana Economic Crimes Office (Economic Crimes)
Ukuqina kwesibindi somzimba: izimbangela kanye nokwelapha
Dharma - Iyini? Dharma enkolweni yobuBuddha. Sanatana-dharma
Kuvaliwe Joint-Stock Inkampani "Lysva Metallurgical Plant": umlando, incazelo, imikhiqizo
Begonia - ukunakekelwa ekhaya
Hada Labo: Izibuyekezo izimonyo